da ihe ole na ole e mgbe kụziri ihe n'ụlọ akwụkwọ mgbe gafere site na nne na nna , otu n'ime ndị a bụ ... Science captivate mmadụ.
Enchanting Science Kwuoro banyere obi, ma eleghị anya, anyị ga- echeta aha Cassanova , ma ọ bụghị na ọ akwa andikpep ma nwaanyị aha ya bụ Ninon de Lenclos .
Ninon bụ na- na klas akwụna ke ochie
France ukwu astute ma chịa egwuregwu , ọ ghọtara n'ezie obi ndị ikom ma ndị inyom.N'ihi nke a egosipụta ọtụtụ ihe , ọtụtụ ndị nējide onwe- n'ezinụlọ n'ezinụlọ ndị iziga ụmụ ha ka ha na-amụta Science Ịhụnanya ya.Ninon dị nghọta spirit nna ukwu ndị ikom ma ndị inyom , ọ na a hụrụ ọtụtụ n'ime oké nobility na orang2 ọzọ.
Otu ahịrịokwu dị n'akụkọ ihe mere eme nke ama Ninon bụ:
"Ịhụnanya dịghị akpa nke unwu , ma ọtụtụ ndị hụrụ n'anya nwụrụ anwụ glut "Nke a bụ otu n'ime ndị isi na iwu nke a na -aghọta site Ninon .
Otu ihe atụ bụ, site na -enye obere ima mmadụ , ọ ga- eme ka ndị mmadụ agụụ ka ịhụnanya, na mmara ahu na -anọgide na- atụ uche gị ...Kama nke ahụ, site n'inye a otutu nke ịhụnanya ga-eme ka ọ na -arịa ọrịa na ike gwụrụ gị.
Ninon nyere ihe atụ na ọtụtụ ndị na ịtụsi anyanwụ mgbe urukpuru , ma, ọ ga- nri mgbe blazing anyanwụ n'oge ruo ogologo oge ...
Kiet ke otu " na-amụrụ " Ninon bụ na-eto eto nobleman emi odude ke ima ima countess ( nwa nobility ) mara mma ma na imperious .N'agbanyeghị mgbalị ka nwa okorobịa dara adọta uche nke Countess .
Mgbe nwa okorobịa a gwara m ka m ihe Ninon , ọ asak n'ihi Ninon maara na ihe niile e mere ya nnọọ nke ukwuu ghọgbuo na nzuzu .
Ninon wee sị nwa okorobịa ahụ na ịhụnanya dị ka a agha , na nwa agbọghọ ahụ bụ emeri e wusiri ike, na-eche na a ga- ebibi.Iji mee otú ahụ, a ga- smart atụmatụ .
Ninon na- ahụ kụziiri ndị ntorobịa ...
Na-amalite aka ebịne Countess na-enweghị na-egosi ụma nwere ma ọ bụ na-achụ , jiri AURA indifferent , mgbe na- enyi na- ebipụta mgbe nile na -adabere .
A otú Countess ga- mgbagwoju anya ma na-eche na onwe m, ihe kpọmkwem bụ nzube n'azụ niile na-eto eto nobleman àgwà .
A ike ọ ga-eguzo falter mgbe obi ya falter . Mgbe ọnwụ -amụ anya , nke dị ugbu a na ndị na-ekweghị na ebe ọ na- adị mfe wakporo ma merie .
Mgbe mbụ frasi nke ụzọ aghụghọ nke ọma emejuputa , mgbe ahụ, nke ọzọ bụ ...
Mkpalite ufụp ke esịt Adiaha edidem .
Ninon doo ndị ntorobịa na ndị na enye hụrụ ya mara mma girl n'ihu Adiaha edidem .
Ọ bụ ezie na ọ na -adịghị aghọta , ndị na-eto eto onye soro ndụmọdụ Ninon , ke otu , enye ama a mara oke mma girl ( nye site na Ninon ). Na ụzọ adịghị anya dọtara uche nke ọtụtụ ndị niile na-achị , nke gụnyere anya ka Countess onye anya na ekworo .
Ọ bụghị naanị nke ahụ, Ninon nakwa -eziga ụfọdụ ndị ọzọ mîkemeke ladies ka oyụhọ ndị ntorobịa na ndị ọzọ .
Ozi ( Achọrọ ) a napụtara , nke a na -eto eto na onye a pụrụ nnọọ iche , ha chọrọ site na ihe ndị kasị mma nwa agbọghọ si gafee France, nwa agbọghọ nwere ike inwe na ọ bụ ihe ukwu kechioma nwaanyị.
Ninon nnọọ echiche na ọ dịghị nwanyị dị njikere na a Ihọd emi ere nke ọma.
Nke a na atụmatụ idozi njehie ka ndị ntorobịa mgbe " -eweda ha ala onwe ha" na -achụso ihe na-achụ ihe Countess gara aga.
Ugbu a, ọnọdụ tụgharịa , Countess na obi ga- enwe ike iji nweta nwa ahụ n'ụzọ ọ bụla .
Ọ bụghị na-echefu Ninon na-aga n'ihu ka ịdekọ ọganihu ha mmepe ọganihu a na ihe omume , ọ na (na nledo ) e dere mgbe ọ bụla Adiaha edidem ga- achị ọchị egwuregwu gwara nwa okorobịa ahụ na oge ọ bụla na Adiaha edidem glanced na -eto eto onye nọ ndị ọzọ ụmụ .
Ke ini Ninon ijide n'aka na nwa agbọghọ obi malitere imeghe , enye ama aka iso ye n'ihu azum na ...
Nye ịrị elu a n'echiche nke Agbaghara
Ninon akpan nwa okoro ahụ mgbe niile nso nwa ya nwaanyị .
Ọtụtụ ndị ọzọ na nnọkọ ebe kwesịrị ha na -ezute , ọ na- adịghị egosi na nwa okorobịa .
Ninon -ese ndị na-eto eto mmadụ akwụsị , mgbe ụfọdụ, ruo izu 2 , na ọ pụrụ ịbụ ka otu ọnwa tupu mberede gosiri na startled Adiaha edidem .
Nke a na atụmatụ n'eziokwu na-arụ ọrụ , n'ihi na ogbugbu -eme ná ndụ, mmetụta nostalgic enwe onye ga-ere ọkụ nke ukwuu n'anya obi nwa agbọghọ .
Ninon nnọọ ihe ịga nke ọma dị ka onye Na-enye Ndụmọdụ ke ima.Ma, dị ka agha akụkọ n'ebe nile, na " Izugbe" mgbe mechie dị mwute na mgbe ọ ghọrọ nnukwu obi ike ma na -eleghara ndị advisory ...
N'ihi na ọ na ama otú ahụ ifufe , ndị na-eto eto mmadụ aghara ileghara Ninon uwe kwuru Adiaha edidem zutere ya.Mgbe ha nanị, na- Investmandiri.com Bisnis Investasi Online Sebagai Lowongan Kerja, Dan Peluang Usaha Murah ekpughe ihe nile obi ya , sị na ọ bụ sikwara ike njite n'ihi na nwa ya nwaanyị ebe ọ bụ na akpa ...
Na na oge ahụ Countess mberede gbanwere àgwà ya, na ọ agaghịkwa hụrụ na nwa okorobịa ahụ dị ka arụsị nke obi a di omimi ma burukwa -adọrọ adọrọ , enye asak dị ka Ọtụtụ ndị ọzọ na -eto eto na ndị ikom ahụ nọ n'ọrụ " na-arịọ " ịhụnanya ...Adiaha edidem ama ( Countess ) na-ahapụ ya ka na -eto eto na nwoke na mgbe ọzọ chọrọ ka e zutere .
N'ihi ya, ruo n'ókè dị , ọ bụrụ na anyị na-egosi na ndị mmadụ kwesịrị , ọ bụghị iji na-arịọ , ma ndị mmadụ nwere onwe ya , na nwaanyị ọ bụla nke na- ndoro anya merie .
Nakwa ima otu nwanyị mara mma na- agaghị ekwe ka dị cashed ezi obi , n'ihi na e wezụga anyị nwere Ọtụtụ ndị ọzọ na ụmụ okorobịa na- lining ye otu ihe ahụ. Ya mere, anyị na- achọ ezi atụmatụ .
Ọfọn, ọdịda nke nwa okorobịa ahụ bụ n'ihi na ọ nọ na " buru unripe mfri "Adiaha edidem bụghị ma merie 100 % ...
Mgbe ahụ, o kwesịrị inwe ike ịnọgide na- enwe " obimgbalielu ", ka akwara eriri nke oke uko nwere ike imebi , ọ bụghị kwa rụrụ bụ ụda , ihe obinkoneelu a nọgidere na-enwe .
Ka ọ dịgodị , mgbe nyochaa si n'ọnọdụ nke Adiaha edidem ,Ọwọrọ enye ama maara na nke a na-eto eto onye na-egwu egwuregwu .Edi enye ifiọkke ebiet ntụziaka nke egwuregwu , enye ama enịm ke akpanikọ nte ke enye edi isi iche Otú ọ dị, gbara mbọ ime ka ọ Ninon atụmatụ na agaghịkwa mgbagwoju anya karịrị Sia .
Kemmasi uto , Ekworo na Sense Kangen / owu na-ama na- ahụmahụ ọjọọ obi , ma kwere na ya ma ọ bụ nke a bụ n'ezie mmetụta nke mmetụta na- chọsiri ike inweta site na otu nwaanyị .Ọ dịghị nwaanyị ndị na mmasị na-eche jijiji na ogbugbu eme n'oge ndụ ya.Na sidelines nke ọjọọ obi , mgbe mgbe na -eto eto gbagote ya nye a n'echiche nke amaghi ka odi na obi ụtọ.Ihe niile a na-eme ka egwuregwu na -aga n'ihu na oké obi ụtọ , dị ka na-ekiri ncha opera nke ịhụnanya , ma ya onwe ya ghọrọ isi ọrụ .
N'ụzọ dị mwute, nwa okorobịa ahụ na mberede ibibi ndị eruba a mara mma nke ịhụnanya akụkọ na nzuzu na ihe a kwatara akwata ya ...
Ihu EXPRESSLY dimkpa girl Fickle
MBỤME: Bang Ron , m na zụtara ebooknya pasang iklan terbaik Otú arata gị ezigbo Nwanyi ke MemikatWanita.com na ihe ịga nke ọma Terapin ke ndụ ...
Enchanting Women unu banyere n'obodo Ninon
E nwere ihe ole na ole e mgbe kụziri ihe n'ụlọ akwụkwọ mgbe gafere site na nne na nna , otu n'ime ndị a bụ ... Enchanting Science okpu ...
7 Mejọrọ Ọtụtụ Ndị Mee Ọ
Dabere na m kwuru afọ ndị gafeworonụ, e nwere ọtụtụ kearu njehie na-emekarị ka mgbe nwoke bịakwutere ( PDKT ) ha ezigbo nwaanyị na ...
Posted by Juragan Channel at 4:07 PM